जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे करिब ४२ अर्ब बीमा शुल्क, कुनले कति ? « नेपालबहस
जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे करिब ४२ अर्ब बीमा शुल्क, कुनले कति ?
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १०:३४
७ साउन, काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा करिब ४२ अर्ब माथि प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुले असार मसान्तसम्ममा ४१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
दोस्रोमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले यस अवधिसम्ममा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
तेस्रोमा एलआइसी नेपाल रहेको छ । कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
त्यस्तै, सन नेपाल लाइफले ९१ करोड, प्रभु लाइफले ८९ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ७६ करोड र महालक्ष्मी लाइफले ७५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
#जीवन बीमा कम्पनी
नेशनल लाईफको चमत्कारिक प्रगति, कम्पनी दोश्रो स्थानमा उक्लियो
ग्लोबल कलेजमा पढ्ने बिद्यार्थीलाई नेपाल लाइफमा इन्टर्नको सुविधा
जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गरे १ खर्ब बढी बीमा शुल्क, अग्रस्थानमा नेपाल लाइफ हुँदा पुच्छरमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स